Ohu a na-ahụghi anya / Azụ Ejiri / Iyi Nwepu Monofilament
A na-eji ihe eji arụ ọrụ igwe mee ihe na arụmọrụ zuru oke. Ọ nwere uru nke nghọta nghọta dị mma, ike dị elu, ezigbo nguzozi ọkụ, nguzogide corrosion dị mma na nhazi dị mfe, nkwụsi ike nha, ọnụọgụ mgbasa sara mbara, ezigbo mkpuchi eletriki na nguzogide ịka nká, mmerụ ahụ na-adịghị mma.
Mlon nylon MH nwere nkọwa zuru oke na ogo a pụrụ ịdabere na nnyefe ngwa ngwa ma enwere ike ịhazi ya dịka mkpa ndị ahịa si dị. (dịka ịdị mma, ụcha, ibu, nkwakọ ngwaahịa, wdg.) iji dabara mkpa ahịa dị iche iche
Spec: ọkpụrụkpụ 0.08-3.0mm
mbukota: ejikari plastik, cone, tube ma ọ bụ akwara, na 2g-5000g
N'ihi ike ya dị elu ex na-eji ike dị elu na-akwụ ụgwọ, MH nylon eri nwere ihu ọma site na ndị na-emepụta ejiji, a na-eji ya eme ihe n'ụdị nke abụọ, veel shoes egwuregwu akpụkpọ ụkwụ ， uwe ọdịnala, kapeeti arab.
Ọ bụkwa eriri azụ kachasị na-ahụkarị, ọ kachasị na 0.1mm-0.6mm ọkpụrụkpụ. Onye na-akụ azụ nwere ike ịhọrọ ọkpụrụkpụ na ike kwesịrị ekwesị dabere na mmiri dị iche iche na ngwa azụ.
0.15MM 200G Nylon string
0.12MM 200G Nylon string
0.2MM 200G Nylon string
0.1MM 200G Nylon string
1.2M 100Y Nylon string
0.25M 100Y Nylon string
0.9M 100Y Nylon string
0.8M 100Y Nylon string
0.6M 100Y Nylon string
0.5M 100Y Nylon string
0.3M 100Y Nylon string
1.1MM 370G Nylon string
MH Video Testing Center Video
Ntugharị Ụlọ Ihe Na-emepụta Ihe